Ukuhlolwa kwesifo kusho ukuthola ukuthi yisiphi isifo esiham
ⓘ Ukuhlolwa kwesifo kusho ukuthola ukuthi yisiphi isifo esihambiselana nezimpawu ezitholakala esigulini. Kuvamise ukubizwa ngokuxilonga kusetshenziswa ulimi lwezo ..
ⓘ UKuhlolwa kwesifo
Ukuqoqa eminye imniningwano ngeziguli, okungafaka imibuzo ngomlando wezempilo ikakhulukazi owabantu abasondelene nesiguli, ukuxilongwa kwesiguli nezinye izindlela zokuhlola izifo.
2. Ukuxilongwa kwe-Covid-19
Ukutheleleka ngesifo sekhorona i-COVID-19 kungaxilongwa okwesikhashana ngokubheka izimpawu yize isiqiniseko sitholakala ngokwenza i-Reverse transcription polymer chain reaction rRT-PCR lapho kusetshenziswa uketshezi oluthelelekile noma i- CT imaging.
3. Ukuhlolwa kwegciwane
nhlangano yezempilo emlabeni wonke i-WHO ishicilele imthetho emningi ye-RNA yokuhlolela igciwane le-COVID-19, eyokuqala ikhishwe ngomhlaka-17 KuMasingana Januwari. Lokhu kuhlola kusebenzisa uhlelo olubizwa nge-reverse transcription polymerase chain reaction rRT-PCR.
Ukuhlola kungenziwa ngokusetshenziswa kwamasampula okuphefumula noma egazi. Ngokuvamile imiphumela itholakala emahoreni ambalwa kuya ezinsukwini. Ngokujwayelekile lokhu kuhlola kwenziwa ngendukwana yokuhlola ye-nasopharyngeal nokuyilapho kufakwa indukwana yokuhlola emakhaleni ukuze ibuye noketshezi kokunye kungasetshenziswa iswaphi yomphimbo.
Izindawo zoxilongo eziningi kanye nezinkampani ezithuthukisa ukuhlola kwe- serology nokungukuhlola okusebenzisa uketshezana olungamafutha oluhlukaniseka egazini ngesikhathi igazi liba ngamahlule, nokuveza izivikela mzimba. Kusukela kumhla ka-6 kuMbasa 2020, akukho kulokhu kuhlola osekuqinisekisiwe ukuthi kusebenza ngokwanele ukuthi kungavunyelwa ukusetshenziswa ngokugcwele. EMelika ukuhlola kwe-serology okusungulwe i-Cellex kuvunyelwe ukusetshenziswa ngamalebhu agunyaziwe kuphela nakhona ezimweni eziphuthumayo.
4. Ukuhlola kusetshenziswa izithombe
Izakhi zezithombe emishinini yokubona ngaphakathi emzimbeni kanye ne-computed tomography CT uhlobo lwesayensi oluveza ingaphakathi lomuntu ngokusetshenziswa kwemishini nekhompuyutha zabantu abanezimpawu kufaka phakathi ukungalingani kokuhlobana kwe-ground glass opacities nokunguhlobo lwezithombe ze-radiography olunemiphumela engacacile kanye nokungabikhona kwe-pleural effusions. ukugcwala kwamanzi emaphashini.
I-Italian Radiological Society ihlanganisa ulwazi lwe-inthenethi lomhlaba wonke ngokuqoqa izithombe zezigameko eziqinisekisiwe. Ngenxa yokuqoqelana nezinye izifo ezifana ne-adenovirus izifo ezihlobene nezinkinga zokuphefumula, izithombe ezingaqinisekisiwe nge- PCR kazicacisi kahle ukuthi zingaveza i-COVID-19. Ucwaningo olukhulu olwenziwe eShayina luqhathanise imiphumela yesithombe sesifuba se-CT kuleso se-PCR nokuveze ukuthi yize isithombe se-CT singacacisi kahle ngesifo, kodwa siyashesa ukuveza izithombe, nokwenze kuphakanyiswe yona njengethuluzi lokuhlola ezindaweni ezihlaselwe ilesi sifo. i-Artificial intelligenceukuhlakanipha okwakhiwe kanye nezinhlelo ezibizwa nge-convolutional neural networks kuthuthukisiwe emishinini youkubona ingaphakathi lomzimba kanye nakwi-CT ukuze kukwazi ukuthola izakhi zezithombe zaleli gciwane.
Wikipedia: UKuhlolwa kwesifo